१५५०१ नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा, केन्द्र बन्यो टेक्सास, कुन राज्यमा कति ? - Nepal Readers
Home » १५५०१ नेपाली विद्यार्थी अमेरिकामा, केन्द्र बन्यो टेक्सास, कुन राज्यमा कति ?
मासाचुसेट्समा ४८४ जना, भर्जिनियामा ४१३ जना र मेरिल्याण्डमा २६२ जना नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरु अमेरिकाका प्राय सबै राज्यहरुमा अध्ययनरत रहेका छन् । किशाेर पन्थीले खसोखासमा लेखेका छन् ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा मन्त्री बनाउनेबारे वामदेव गौतम र केपी ओलीबीच भनाभन
रहेनन् नख्खु विद्रोहका योद्बा वीरबहादुर